Obaamaan murteessaa sabaa (jury) ta'anii hojjechuuf Chikaagoo dhufan illee, dhorkamaniiru. - BBC News Afaan Oromoo
Obaamaan murteessaa sabaa (jury) ta'anii hojjechuuf Chikaagoo dhufan illee, dhorkamaniiru.
Prezidaantii Ameeriikaa duraanii Baaraak Obaamaa mana murtii Chikaagoo keessatti haa argaman malee isa dhaqaniif utuu hintajaajiliin dura abba murtiin akka hoji kana dhorkaman bekameera.
Namoonni hedduunis prezidaantii Ameerikaa 44ffaa arguuf naannoo Giddu galeessa Daaleey gamoo bulchiinsa magaala bira guutanii turan.
Hojii irra dhorkamuu isaniif ifatti waanti beekamee hinjiru. Garuu namoota murteessuuf saba keessaa waamamanii dhufan ramaddi kennuufi diduun waan haara miti.
Obbo Obaamaan gara mana murtichaatti kan dhufan Roobii ganama wayita ta'u gara walakkeessa guyyaa irra deebi'anii deeman.
Wayita tokko profeesara seeraa kan turan prezidaantiin durii kun, Chikaagoo keessaa mana qabu.
Namoota saba keessa bahuun murteessuuf dhufan hundaaf mata mataatti doolaara 17.20 Kaawuntii sanaan kaffalamaaf.
Obbo Obaamaan mana isaanii Keenwooditti argamu keessa gara bakka konkolaattonni isaanii dhabbatanitti wayita deeman helikoopteroota dhaaboollee oduu waraabamaniiru.
Goodayyaa suuraa Obaamaan wayita degertootaan nagaa fuudhu
Karaabaata malee jaakeeta kan ufatan obbo Obaamaan, liiftii keessa galuun gamoo 19ffa gahuun murteesitoota saba keessa dhufan biroo, gazixesitootaa, hojjettoota mana murtee fi abukaatoota walliin wal arganiiru.
Obbo Obaamaaniis yeroo dheeraa achi utuu hinturin, tajaajilli isaanii akka hinbarbaadamne abbaa seeraa muummichaa kaawuntii Kuuk, Timoozi Ivaan itti himaniiru.
Kun utuu hinta'in dura prezidantichi duraani kun vidiyoo ''seensa gahee murteessitoota saba keessaa dhufanii'' ilaalanii turan.
Utuu hindeemin duras obbo Obaamaan namoota murteessitoota saba ta'uuf fedhiin achitti argaman hundaa galateeffataniiru.
Lammiiwwan Ameerikaa tokko tokkoos kitaaba obbo Obaamaan barreeffame fidanii dhufuun akka mallatteessaniif wayita gaafatan, hojjettoota mana murtii dabalatee namoonni kaan immo suuraa waliin ka'u tattaafataa turan.
Prezidaantii duraanii harka qabuu kootiiin ''akka dhadhaa xiqqoo harka namaa keessatti baqxuun ta'e,'' jechuun murteessituu sabaa (jury) ta'uuf kan achitti argamte tokko gaazexeessitootatti himteetti.
Guyyuma sana sa'aa booda, Obbo Obaamaan haasaa kaffaltii qabu dhaabbata GCM Groosveenoor jedhamutti akka godhan, za Chikaagoo San-Taayimis gabaaseera.
Goodayyaa suuraa Obaamaa ilaaluuf tuuta walitti qabaman
Prezidaantiin Dimookraatii duraanii ''dimokraasii keessatti wajjiirri olaanaan jiru saba biyyattiiti, akkasumas murteessaa sabaa ta'anii hojjechuu akka dirqama lammii tokkootti fudhatu,'' jechuun Ketii Hiil, Daarekterri qunnamtii obbo Obaamaa dubbatteetti.
Obbo Obaamaan bara 2010 keessa wayita marsaa jalqabaaf aangoo irra turan murteessaa sabaa akka ta'uun argamaniif waamamani turan. Haa ta'u malee dursuun biyya Iraaq keessatti prezidanticha naannoo Kuurdiistaan kan ta'anii waliin balama qabachuu isaanii sababeefachuun balamni kun darbuuf gaafii gafatanitti milkka'anii turan.
Bara 2015 pirezidaant duraanii W. Buush hojii murteessaa sabaa akka ta'aniif Daalaas, Teeksaasitti waamamanii erga dhufanii booda hojii walfakkaataaf namoota waamaman biroo waliin suuraa erga ka'anii booda isaanis utuu hinfudhatamin hafaniiru.
Bara 2013 keessas prezidaantiin duraanii Biil Kliintanis magaalaa Niiw Yoork keessatti tajaajiluu hojii walfakkaataaf dhaquun utuu hinfudhatamin hafaniiru.
Obbo Taayyee Danda'aafi barsiisaa Siyyuum Tashooma hiikaman